Ngwá Ahịa Arụrụ - Ikkaro
Mepee ngalaba akpọrọ Ngwá Agha A Na-arụ n'ụlọ Ọ bụ mkpebi siri ike. Anyị abụghị ndị agha ime ihe ike adịghị amasị anyị ma mgbe anyị tụlechara isiokwu ndị dị na Ikkaro, anyị achọpụtala na n’afọ ndị a, anyị amatala ọtụtụ ozi gbasara ụta eji eme ụlọ, ụgbọ okporo ígwè, na ngwa ọrụ ụlọ ọrụ. Ha abụghị ngwa agha eji eme ihe, ma ọ bụ obere egbe ma ọ bụ egbe egbe, mana ha na-edo ya mgbe ọ bụla, agbanyeghị na ọ na-ewute anyị.
Anyị achọghị ka onye ọ bụla mee ngwa ọgụ iji mee ihe ọjọọ, kama ka anyị na ndị enyi nọrọ ụfọdụ oge, dị ka onye na-agba ụta, n'ihi na ha na-agba ụta ma ọ bụ pensụl pensụl. Ọtụtụ n'ime ihe ndị dị na nkebi a na-eme ngwa agha ndị enwere ike ịtụle dị ka ihe eji egwuri egwu, ndị na-ebupụta mkpụrụ ego, catapult clip, ma ọ bụ égbè gauss nke nwere ụmụaka magnet. Nchọpụta dị mfe.
Ya mere, elela anya na ngalaba a maka ihe ọ bụla na-abụghị ihe omume ntụrụndụ dị mfe ma ọ bụ nke karịrị ịmata ihe dị ọcha iji hụ otú otu usoro ọrụ si arụ ọrụ. Onweghi onye ji egwuri egwu egwuri egwu? Ka è ji ụta na eriri mee ụta? Ma ọ bụ ịfụ egbe iji tụfuo bọọlụ mpempe akwụkwọ na klaasị? Ndi nwe mmadu, ndi a bu ngwa agha, ngwa agha eji eme ulo, ka anyi chefuo maka okwu ojoo na-adighi nma.
Ekwetaghị m na ozi a na-agba onye ọ bụla ume ime ngwa ọgụ ma jiri ya eme ihe ọjọọ dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike iji merụọ ahụ. Mana ọ bụrụ na ịchọta edemede nke ị chere na ọ baghị uru, biko kpọtụrụ anyị ma anyị ga-eji obi ụtọ nyochaa ya.
Esi njide igwe kwụ otu ebe
Anyị ga ahụ -esi mee ka njiko na rim nke igwe kwụ otu ebe. Na ụkpụrụ ọ gaghị abụ ụta dị ike, mana ọ dị mkpa iji nwee ike iji ya nọrọ ihe dị ka mita 20, ma nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu na ebumnuche.
Dị ka nwata m Emewo m ọtụtụ ụta, nwere ụdị alaka dị iche iche, osisi na plastik. Iji eriri, tubes igwe kwụ otu ebe, wdg, mana ọ datụbeghị m ụta n'ụzọ a. Na m nwere ụfọdụ ochie wheel nke m maraworị ihe ọ na-eme.
Otu esi eme ụlọ ahịa Trebuchet catapult
O doro anya na ị masịrị gị katapila, onye ọ bụla nwere mmasị na ha :) Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ime ka ha buru ibu, ka mma karịa mma.
Nke a ị hụrụ na onyogho a trebuchet catapult. E nwere ọtụtụ narị ụzọ iji mee katapila a. Si gigantic ụdị, dị ka ihe ochie ochie castle wakpo ngwá agha obere na ibu arụrụ n'ụlọ ụdị
Esi mee kristal kristal
Ozizi a dị mfe, agbanyeghị na echere m na na omume ọ ga-adị mgbagwoju anya.
Usoro a na-echetara anyị ụzọ igbue okwute iji nweta akụ na prehistory. O yikwara nnọọ oyiyi ahụ na-egosi anyị a obsidian akụ isi a na-akpọ iko mgbawa.
Jiri uru nke akụkụ ahụ mee ihe na ntọala nke karama iko maka ọdịdị nke aka ukwu. Kwesighi ịhọrọ karama nwere ntọala nke na-enweghị oke concave, ma ọ bụ nke ukwuu.
Otu esi eme eriri na akwukwo nri akwukwo nri
Enwere m mmasị na vidio a ebe ha na-akọwa anyị otu esi eme ụdọ na eriri akwukwo nri. Ọ bụghị a ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme akwa eji aru ulo site na mma ochie.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ụzọ dị mfe iji nweta ceji mma ulo.
Mgbe anyị nwere otu okirikiri ikiri agụba tufuo, anyị nwere ike egweri ya iji nweta mma ole na ole dị nha.
Otu esi eme achara achara
Nwa oge gara aga anyi huru -esi mee ka a ụta na anyị nwere ụfọdụ ụdị a kachasị ele anya maka ederede ederede.
Ma ụta ahụ na-efu efu akụ. N'oge a, a na-ejikarị eriri carbon carbon mee ha, mana ebe a ka anyị chọrọ igosi gị -esi mee ka achara di na achara jiri achara.
Otu esi eme egbe nke na-ebupụta bọọlụ ping pong
Anyị ahụworị ụdị egbe na agba egbe pingpong. Ma, taa bụ egbe egbe, ejhehe
Ihe onyonyo a mere ka o doo anya etu esi wu ya, yabụ agaghi m ekwusi ike karia. Naanị hapụ ihe oyiyi na nha iji mee ka ọrụ gị dị mfe.
Office ngwá agha
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka imepụta ihe ngwá ọrụ ụlọ ọrụ u Ngwá Ọrụ Ọfịs. Ngwá agha nwere ike iji ihe ụlọ ọrụ na-arụkarị, obere akwụkwọ, mkpochapu, pensụl, pensụl pensụl, wdg. Ntị, ọ bụ ezie na ọ dị ha ka enweghị nsogbu, ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a nwere ike ịdị egwu Jiri nlezianya jiri.
NKWUKWU: Dịka ngwá ọrụ ọfịs ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị oke egwu ma mebie emebi. Jiri nlezianya mee ihe.
Catapult na obere vidiyo
Anyị na-amalite na ngalaba nke Ngwá Ọrụ Ọfịs o ngwá ọrụ ụlọ ọrụ.
Na nke a anyị na-egosi -esi mee ka katapila nwere mkpachị na roba band.
Nke a mfe katapila Ọ nwere akụkụ abụọ. Na otu aka nkwado na aka nke ọzọ counterweight, nke ga-arụ ọrụ site na-agbanwe agbanwe
Ka anyị hụ ihe owuwu nke nkwado na onyonyo abụọ dị mfe
Otu esi eme pensụl crossbow
Anyị na-ahapụ ihe nlereanya a na-adọrọ mmasị iji wuo a crossbois na pensụl, pen na 7 roba band.
Ọ bụ ihe ọzọ ejiri mara dị ka ngwá ọrụ ụlọ ọrụ.
Igwe égbè agbakọtara n'ime ụlọ
Otherbọchị ọzọ anyị hapụrụ vidiyo nke nkuzi maka etu esi eji egbe ekike eme ụlọ site na nzọụkwụ
Taa, anyị na-agbasa na ụfọdụ vidiyo na-adọrọ mmasị
Modeldị 3D nke égbè ahụ.
Ewu nke égbè ikuku abịakọrọ n'akụkụ atọ: